Nezvedu - Hangzhou Hongli Machchan Co, Ltd.
Yakatangwa muna Nyamavhuvhu 2002, iyo kambani ine vashandi vanopfuura makumi manomwe, 6 nzvimbo dzekugadziridza, uye iri bhizinesi-rakavakirwa muZhejiang Province. Iyo kambani iri mune yeindasitiri paki yeLinpu Town, Xiaoshan, Hangzhou Guta, Zhejiang Province, imwe makiromita kubva kuLinpu kubuda kweHangzhou Jinhua Quzhou Expressway padyo neEast mbiri track yeProvince mugwagwa 03. Kambani kuenda kumodhi yekucheka, -musoro dhizaini kugadzira uye kugadzira, escalator gungano mutsara, zvikamu kugadzirwa kwakavakirwa.
Bhizimusi uzivi: kuvimbika, kubatana, pragmatism, hunyanzvi uye kukura kwakasimba
Yakatangwa muna 1997, Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments CO., LTD inyanzvi uye inotungamira yekugadzira yezvinhu zvese zvekuongorora zvinosanganisira Dhijitari Thermometers, Infrared Thermometers, uye Dhijitari Sphygmomanometers etc. yedu yekumwedzi mwedzi ingangoita mazana masere mazana mashanu ezviuru zve thermometer uye zviuru zana zveSphygmomanometer.
Sebhizimusi repamusoro tekinoroji, yedu R & D dhipatimendi inosanganisira mainjiniya, nyanzvi uye magadzirirwo ane ruzivo rwakawanda optoelectronics, semiconductor uye IC dhizaini etc.
Takatogadza yakasimba uye inoshanda QC system. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa zvakatsiga pasi pehunhu manejimendi system ye ISO 13485 uye 21CFR820, kuitira kuzosangana neChipatara CE uye US FDA zvinodiwa.
Kubata kwakanaka uye hunhu hwakavimbika hunotibatsira kuhwina mukurumbira wepasi rese, semuenzaniso:
Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Poland… USA, Brazil, Argentina, Colombia, Mexico, Chile… Australia, Philippinespine, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore… South Africa, Nigeria… Uye dzimwe nyika
Izvo zvichave zvakakoshesa kuti kana iwe uchigona kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve kambani yedu uye zvigadzirwa. Kugamuchirwa kuti ushande pamwe nesu neOEM uye ODM.